Denmark: Somali Dil Lagu Eedeeyay
Nin Somaali ah oo ku nool dalka Denmark ayaa lagu eedeeyay dilka haweenay ka shaqaysa arrimaha Bulshada.
Ninkan oo da’diisa lagu tilmaamay 28 jir ayaa la sheegey in uu dalka Denmark ku diley haweeney u shaqeyneysey xarun tababar u dirta dadka shaqo la’aanta oo kiskiisa qaabilsaneyd.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Berthe Christiansen oo u shaqeyneysey xarun ku taalo magaalada Holstebro oo dadka shaqo la’aanta ah u dirta tababar shaqo ayaa lagu diley meesha baabuurta la dhigta ee shaqadeeda.
Ninkan Somaliga ayaa ka mid ahaa dadka kiisaskooda ay Christiansen qaabilsaneyd.
Ninkan lagu eedeeyey inuu dilka haweeneydan geystey ayaa haatan lagu hayaa xabsiyada dalka Denmark mid ka mid ah wuxuuna sheegey inuusan dambigaas sameynin. Waxaa maxkamad la soo taagi doona 24ka bisha soo socoto ee February.
Dhacdadaan ayaa ku soo aaddey xilli ay xiisado kale ka taagnaayeen dalkaasi Denmark oo nin kale oo Somali ah lagu eedeeyey inuu isku deyey inuu dilo ninkii Danishka ahaa ee sawiray cartoonka nabi Muhammad.
Ninkan waxaa asagana kiiskiisa maxkamadda la horkeeni doona bisha February 23deeda waxaana lagu xukumi karaa xabsi daa’in ah haddii ay ku caddaato inuu dambiile yahay.
Faahfaahinta warbixintan ka dhegayso qaybta hoose ee boggan.